macron အဆိုအရ Notre Dame အဖြစ်ပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်မီးငြိမ်းအေးနိုင်ပါလိမ့်မည် - New York Times ကို - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » Autres » Selon Macron, Notre-Dame sera reconstruite au fur et à mesure de l'extinction du feu – New York Times
Selon Macron, Notre-Dame sera reconstruite au fur et à mesure de l'extinction du feu – New York Times
Tele RELAY တစ်ခု 16 ခုနှစ်ဧပြီလ 2019
ပဲရစ် - ပြင်သစ်သမ္မတ Emmanuel macron ရှစ်ကျော်ရာစုနှစ်မြို့ဘုရားရှိခိုးကျောင်း, သင်္ကေတပြန်ဆောက်ဖို့ကတိပြုထားသည်နှင့်အစိုးရရှေ့နေများကိုဖွင့်ခဲ့ကြပြီးနောက် Notre Dame ငွိမျးထားပြီးဖျက်ဆီးခံရသောမီး, အရာရှိများ, အင်္ဂါနေ့ကပြောပါတယ် ပြင်းထန်စွာ Gothic အဘိဓါန်ဗိသုကာတစ်ဦးကမ္ဘာကျော်ကျောက်မျက်ရတနာပျက်စီးသောမီးစေသောအဘယ်အရာကိုစုံစမ်းစစ်ဆေး။
မြှားဇာပန်းထည်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းနှင့်၎င်း၏အိမ်ခေါင်မိုးတာမီးတောက်နှင့်မီးခိုး၌ရှိသောတနင်္လာနေ့ပြိုကျရုံနာရီအကြာတွင်မစ္စတာ macron ဟာနေဆဲလည်းမီးလောင်ဖွဲ့စည်းပုံမှာရှေ့၌ရပ်နေ၏။ နှင့်ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ရန်ပုံငွေမှနိုင်ငံတကာအားထုတ်မှုအင်္ဂါနေ့စတင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။
"ကျနော်တို့ကကျွန်ုပ်တို့၏သမ္မတကတော်ပြန်လည်တည်ဆောက်သွားမှာပါ" ဟုသူကပြောသည်။ "ဒါဟာပြင်သစ်မျှော်လင့်ထားတယျ။ "
ပြင်သစ်ဘီလျံနာ Pinault မိသားစု 100 ယူရိုသန်းကတိထားတော် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 113 သန်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ, အေအက်ဖ်ပီသတင်းဌာနကိုနှင့်ဘားနတ်အာနို့ထ်သည်ဇိမ်ခံပစ္စည်းအုပ်စုတစ်စု LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton ၏ပိုင်ရှင်များ၏မိသားစုသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည် $ 200 သန်းအထောက်အကူပြုစီစဉ် .
ပထမဦးဆုံးတနင်္လာမီးနှိုးဆော်သံ 18h20 အစပျိုးခဲ့ပြီးစစ်ဆေးမှုများဆောင်ရွက်ပေမယ့်ပဲရစ်၏အစိုးရရှေ့နေ, Remy Heitz မီးကိုမရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းအင်္ဂါနေ့ကပြောပါတယ်ခဲ့ကြသည်။ တစ်ဦးကစက္ကန့်နှိုးဆော်သံ 18h43 အသံပါလိမ့်မယ်ဟုသူကဆိုသည်သိရပါတယ်နှင့်မီးထပ်ခိုး၏သစ်သားဘောင်အတွင်းရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။
"တစ်ဦး Mass မကြာမီမတိုင်မီစတင်အဖြစ်ဤအတောအတွင်းအဆိုပါဘုရားကျောင်းမှာရွှေ့ပြောင်းခဲ့," ဟု၎င်းကပြောသည်။
မစ္စတာ Heitz နီးပါး 50 စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း, မီးများ၏အကြောင်းရင်းဆုံးဖြတ်ရန်အလုပ်လုပ်လုပ်သားများနှင့်အခြားသက်သေများကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း, ဒါပေမယ့်ပြောသည် "ဟုအဆိုပါစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရှည်လျားပြီးရှုပ်ထွေးဖြစ်လိမ့်မည်။ " ဒါကြောင့်ယခုအချိန်အထိမီးမတော်တဆမှုဖြစ်ရပြီပုံ, သူကပြောသည်။
ပိုများသောဂါဗြေလ, ပဲရစ်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့တစ်ခုပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်, မီးငွိမျးခဲ့ပေမယ့်မီးသတ်သမားနေဆဲ "ကျန်နေတဲ့" မီးလျှံရှာကြ၏ထုတ်ခံရမည်ဖို့လိုအပ်အံ့သောငှါအင်္ဂါနေ့နံနက်ကဆိုသည်။
ထိုမှတပါး, Notre Dame အနီးသတင်းထောက်များမှစကားပြော, ကျွမ်းကျင်သူများယခုအားနည်းလျက်ရှိသည်ကိုဘယ်လိုကြည့်ဖို့အဆောက်အဦးများ၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆနျးစစျပါလိမ့်မယ်။
Notre Dame ဟောင်းခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းများ၏အမြစ်ပေါ်ဆယ်နှစ်နှင့်ဆယ်သုံးရာစုနှစ်များတွင်တည်ဆောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ရောမမြို့ရိုးသည်နှင့် Seine ရှိကျွန်းတစ်ကျွန်းပေါ်တွင်တစ်နှစ်လျှင်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 13 လူဦးရေသန်းနေဖြင့်သွားရောက်ကြည့်ရှုသည်။ ပတျဝနျးကငျြအဆောက်အဦးအပေါ်စီးပါကတစ်ဦးကိုချက်ချင်းဘာသာရေးအထိမ်းအမှတ်အဆောက်အဦး, ဒါပေမယ့်လည်းပြင်သစ်တစ်အမျိုးသားရေးအထိမ်းအမှတ်, ယဉ်ကျေးမှုနှင့်သမိုင်းမသာအဖြစ်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကလူကအသိအမှတ်ပြုသည်။
ဗာတီကန်များအတွက်တစ်ဦးကပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်, Alessandro Gisotti, ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး Francis အဘို့ဆုတောင်းကြောင်းအင်္ဂါနေ့က Twitter တွင်ရေးသားခဲ့သည် "ဒီကြေကွဲဖွယ်အခြေအနေကိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်သောသူအပေါင်းတို့။ "
Parisian နှင့်ဧည့်သည်များတိုက်ရိုက်ရုပ်မြင်သံကြားကိုကြည့်အံ့အားနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမရေမတွက်နိုင်သောလူများ, ၎င်း၏ကျော်ကြားပျံကသူ့အချိန်အတော်လေးပါးလွှာနံရံများနှင့်ထိပ်ကိုထောကျပံ့ဖို့ built buttresses အတူဘုရားရှိခိုးကျောင်းအဖြစ်ထိတ်လန့်ထဲမှာစောင့်ကြည့်ရှေ့တော်၌, ရက်အနည်းငယ်မီးရှို့ရာ အီစတာတနင်္ဂနွေ၏အခမ်းအနားများ။
[Alorsqu'unmonumentfrançaissebrûlaitlesymbolismeétaitdurpourlepaystroublé ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗိသုကာဝေဖန်ရေးသားခဲ့သည် .]
ဘေးမှရပ်ကြည့်နေသူတွေရာပေါင်းများစွာဖြစ်ပျက်ခဲ့သောအရာကိုနားလည်သဘောပေါက်ဖို့ကြိုးစားနေအများအပြား, အင်္ဂါနေ့နံနက် Notre Dame အနီးစုဝေးစေတော်မူ၏။
"ကျွန်မနောက်ဆုံးညဥ့်မီးကိုမြင် သွား. ငါနေဆဲယနေ့နံနက်တုန်လှုပ်တယ်သောအခါငါရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ပါပဲ" ဟု Serge ရော်ဂျာတစ် Parisian အငြိမ်းစား 67 နှစ်ပေါင်းဟုပြောသည်။ သူကမီးသတ်သမားဆေးလိပ်သောက်အဆောက်အဦ, အ Seine ၏အခြားမြစ်ရေတင်စီမံကိန်း၏အတွင်းနှင့်ထွက်အချို့ကိုရေဘုရားရှိခိုးကျောင်းကိုလေပေါ်မှာပ watched ။
မျက်ရည်ရော်ဂျာ Pascal Defranqui, 59 နှစ်ပေါင်း၏မျက်လုံးများဖြည့်ဖို့စတင်ခဲ့သည့်အတိုင်းသူမနောက်ဆုံးညဉ့်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းအနီးစုဆောင်းခဲ့ကြောင်းသူမ၏ပြာကိုအပ်ပေးတော်မူ၏။ ရော်ဂျာလိုပဲ, သူမဟာသူမဒုက္ခအိပ်ပျော်နေသောခဲ့ဟုဆိုသည်။ သူမသည်အားချီးမြှောက်ရန်, လို့သူကပြောပါတယ်, အင်္ဂါနေ့အရုဏ်မှာဘုရားကျောင်းမှာခရီးထွက်ခဲ့ဖူးတယ် "နေဆဲရပ်နေပဲရစ်၏အလှဆုံးအမျိုးသမီး။ "
"ကျနော်တို့သူ့ကိုချစ်သောကြောင့်ကျနော်တို့က, Parisian, ကြှနျုပျတို့သိ, Notre Dame မှာဖြစ်ပျက်အကြောင်းပြောဆိုရန်ရှိသည်ကဤကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်" ဟုမစ္စ Defranqui ကဆိုသည်။ သူမသည် Louvre မှာအနုပညာသမိုင်းတွင်၏သင်တန်းအတွက်ဘုရားကျောင်းမှာ၏ဗိသုကာလေ့လာခဲ့ပြီးလျှင်, Ile Saint-လူးဝစ်အပေါ်သူ၏တိုက်ခန်းအတွင်းပြတိုက်မှပြန်လာသော၎င်း၏တာဝါတိုင်မှာအံ့ဩခြင်းမ, ၏အိမ်နီးချင်းကျွန်း Notre Dame တည်ရှိရာ Ile de la, ဖျောပွပါ။
"ငါဘာတွေဖြစ်ပျက်ခဲ့သိလိုမသေချာဘူး" မစ္စ Defranqui ကဆိုသည်။ "ငါသည်ကိုယ့်ကြောင့်တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးပြန်လည်ချင်တယ်။ "
အဆိုပါဘုရားကျောင်းမှာ, Mgr ၏ပါမောက္ခချုပ်။ ပက်ထရစ် Chauvet, မီး, အမိုးသည်းထန်စွာသစ်သားထုပ်ကွန်ယက်ကိုစတင်အလယ်ခေတ်ကနေရသောနေ့စွဲများစွာကိုနှင့်ပြည်တွင်းရေးအောက်တိုက်သောကျောက်မျက်နှာကျက်အထက်နှင့်ခေါင်မိုးအောက်မှာတည်ရှိပါတယ် "ဟုအဆိုပါသစ်တော" ဟုအမည်ပေးထားသည့်ရှိသည်ဟုထငျရှားဟုပြောသည်။
"ကျနော်တို့အစောင့်ရိုက်ကူးသည့်ဘုရားကျောင်းမှာမှာ" Monsignor Chauvet အင်္ဂါနေ့ကပြောပါတယ် ပြင်သစ်အင်တာမီလန် ရေဒီယိုဘူတာရုံ။ "သုံးကြိမ်တစ်ရက်, သူတို့ကတစ်ဦးအကဲဖြတ်စေရန်သစ်သားအိမ်ခေါင်မိုးအောက်မှာသွားပါ။ "
သူကဤပုဂ္ဂိုလ်ရှိရာသူသည်မည်မျှမကြာခဏသတ်မှတ်မပြုခဲ့ပေမယ့်ဘုရားကျောင်းမှာ၏ site ပေါ်တွင်တစ်ဦးမီးသတ်သမားလည်းရှိခဲ့ပါသည်ကပြောသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်တပ်စွဲသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရှိတယ်မနေ့ကခဲ့လျှင်။
"လုံခြုံရေးအတွက်, ကျနော်တို့ပိုပြီးလုပ်နိုင်စဉ်းစားကြဘူး" ဟု၎င်းကပြောသည်။ "ဒါပေမယ့်သင်ကကြိုတင်ခန့်မှန်းမရနိုငျသောပြဿနာအမြဲရှိ၏။ "
အဆောက်အဦးကိုယ်တိုင်ကမှပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအပြင်, မီးအရာမြင့်မားတဲ့အပူချိန်နောက်ခံမှာဦးဆောင်နေဖြင့်အတူတကွကျင်းပလွှာနှင့်အတူ၎င်း၏ဆိုငျရာအစအနရှိရှိနှင့်၎င်း၏စွန်းဖန်ပြတင်းပေါက်ခြိမ်းခြောက်လျက်ရှိပါသည်။ ။ ဘဏ်ဍာ, သူ့ကားစင်တင်စဉ်အတွင်းသညျယရှေုအားဖြင့်ဝတ်ဆင်ခဲ့ကြလိမ့်မယ်လို့၌ဆူးပင်ကိုပန်းဦးရစ်သရဖူကို၏ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတစ်ခုနေစဉ်, ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်သောခံခဲ့ရသည်အခြားသမိုင်းတ္ထု၏ status မှုန်ဝါးနေသည် .
[Theblaze  ကကျယ်ပြန့်စုဆောင်းခြင်းခြိမ်းခြောက် အဆိုပါဘုရားကျောင်းမှာ၏ခရစ်ယာန်အနုပညာနှင့်ရှေးဟောင်းပစ္စည်း။ ]
အဆိုပါဗိသုကာပညာရှင်သူကို 1980 1990 နှစ်အတွင်းဘုရားကျောင်းမှာ၏လုပျငနျးကြီးကြပ် သူကအဆောက်အဦ၌များစွာသောယုံကြည်သည်နှင့်ပရိဘောဂကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်နိုင်ကဆိုသည်။ အတွင်းပိုင်း၏ရုပ်ပုံများထိုကဲ့သို့သောခုံတန်းရှည်နှင့်တရားဟောစဉ်မြင့်ရှိရာကိုအဖြစ်အများအပြားမီးလောင်လွယ် devices များ, ကျန်ရှိတော့သည်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။
"ကျောက်မဟာ firewall ကအဖြစ်သရုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်စွန့်ခွာခြင်းမှအပူတားဆီးခဲ့ပါတယ်" ဟုအဆိုပါဗိသုကာပညာရှင်ဘား Fonquernie ကဆိုသည်။
ဒါပေမယ့်အိမ်ခေါင်မိုး, ခဲစာရွက်များနဲ့ဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ကြီးမားတဲ့သစ်သားဘောင်, အဓိကအားပျောက်ကွယ်သွားပြီမှသလိုပဲ, သူကပြောသည်။ ခေါင်မိုးပေါ်တွင်ယခင်စမ်းသပ်မှုဖွဲ့စည်းပုံအများစုမူရင်းထုတ်လုပ်သူများကစုဝေးအတူတူပင်ပိတ်ပင်ထုပ်များနှင့်သစ်အယ်သီး၏ရေးစပ်ခဲ့ပြသခဲ့သောမစ္စတာ Fonquernie ကဆိုသည်။
မိုးမှန်မှန်ပြုပြင်ကြနဲ့တံဆိပ်ခတ်ခဲ့သည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာဒါကြောင့်ရှည်လျားကြာမြင့်။ သို့သော်ဤသစ်သားကအလွန်သွေ့ခြောက်လေ၏နဲ့အလွယ်တကူမီးမရှို့နိုင်သောအဓိပ်ပာယျ, သူကပြောသည်။
[ဤတွင် အဘယ်အရာကိုကြှနျုပျတို့သိနှင့်မသိရပါဘူး မီးပေါ်မှာ။ ]
နှစ်နှစ်အဆိုပါဘုရားကျောင်းမှာများအတွက်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူရှိပါတယ် ကလေးနက်အသွင်ပြောင်းလိုအပ်ဆိုပါတယ် ရာနီးပါး 180 သန်းကုန်ကျမည်ဖြစ်သည်။ ထုံးကြောကျမြား၏မျက်နှာစာတာလေတိုက်နှင့်တကွမိုဃ်းရွာသဖြင့် dislodged အပိုင်းပိုင်းနှင့်အတူ, ဆုတ်ယုတ်လာခဲ့သည်ခဲ့ပြီးအဆိုပါပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်အန်ဒရီ Finot ကဆိုသည်။
"ထိုအခါယခုဖြစ်ကောင်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပေါ့ဆမှု၏, သွားကြောင်း" ဟုမစ္စတာ Fonquernie ကဆိုသည်။ "သူတို့ပြုသကဲ့သို့လာမည့်ဤမျှလောက်များစွာသောဟောင်းများကိုခြောက်သွေ့တဲ့သစ်သားအား, အပူနှင့်အလုပ်လုပ်အစွန်းရောက်စောင့်ရှောက်မှုလိုအပ်သည်။ "
ဤဆောင်းပါးတွင်ပထမဦးဆုံးပေါ် (အင်္ဂလိပ်လို) သည်ထင်ရှား NEW YORK TIMES
အဘယ်သူမျှမရ, မ Xvideos Xnxx တိုင်း 1 000 အမြင်များအပင်တစ်ပင်ကိုစိုက်ဘူး။
ပုပ်ပင်နံပါတ်များကို အသုံးပြု. ရပ်တန့်! (ဒီမှာဘယ်လိုဖွင့်)
ပီရူးဆန့်ကျင်ဗင်နီဇွဲလား - ဘောလုံးပွဲအစီရင်ခံစာ - ဇွန်လ 15 2019 - ESPN
(VIDEO) လီလီ Vegas & # 39; 39 ပူနွေးလာသည် & #; leggings အတွက် twerk ရိုင်းနေဖြင့် Instagram ကို - ဗွီဒီယို
Mvangan: အသစ်ကအိုင်တီ tool များ၏ကျောင်းတွင်စည်ပင်သာယာဝန်ထမ်း
ကင်မရွန်း - ဂျော့ဘ်204
လူတွေ & ပုံစံမျိုးမှာနေထိုင်5,282